Automan Shell Archives – Automan
Shell Helix HX7 5W-30 ပွတ်တိုက်မှူလျော့ ချရန် အထူး Base Oil နှင့် ပေါင်း၍ Special Active Cleaning နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော Fully Synthetic အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Model မြင့်ဓါတ်ဆီကား ဒီဇယ်ကား...
Shell Helix HX7 10W40 Special Active Cleaning နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော Semi Synthetic အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Model မြင့်ဓါတ်ဆီကား ဒီဇယ်ကား ( သီးသန့် ဆီစစ်မပါသော ) နှစ်မျိုးစလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Special...
Shell Helix HX5 15W40 အရည်အသွေးမြင့် Base Oil ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော Preminum Multigrade အင်ဂျင်ဝိုင် ဖြစ်ပြီး Fuel-injected ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များနှင့် Turbo-charged indirect injection ဒီဇယ်အင်ဂျင်များနှင့် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ Ultimate...
Shell Helix HX3 d20W50 Multi-graded အင်ဂျင်ဝိုင်သည် Ultimate Active Cleansing နည်းပညာကို အခြေခံထုတ်လုပ်ထား၍ အင်ဂျင်ဂျိုးတက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး အင်ဂျင်သက်တမ်းကြာရှည်အောင် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။အင်ဂျင်ဝိုင်၏ စေးပျစ်မှုကို ကြာရှည်စွာထိန်းထားနိုင်ပြီးဆီစားနှုန်း ကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။...
Shell Helix Ultra 5W40 Shell Ultimate Active Cleansing နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော Fully Synthetic Active Cleansing နည်းပညာကြောင့် အင်ဂျင်အတွင်းရှိ ချေများဖယ်ရှားရာတွင် Mineral Oil များထက် ငါးဆခန့် ...
Shell Advance Shell is the number one global lubricant supplier, delivering market-leading lubricants to consumers in over 100 countries. Shell Lubricants brings world-class technological insights to...
Shell Rimula R4X 15W40 အထူးရွေးချယ် စီမံဖော်စပ် ထားသည့် Additives များပါဝင်သော Heavy Duty Diesel အင်ဂျင်ဝိုင် ဖြစ်ပါသည်။ Rimula R4X ၏ အဓိက အားသာချက် (၃) ခု (...
Shell Rimula R2 Extra 15W40 စွမ်းဆောင် ရည်မြင့်မားသော Additives များဖြင့် ပေါင်းစပ်ပါဝင် ဖော်စပ်ထားသည့် Multigrade Heavy Duty Diesel အင်ဂျင်ဝိုင် ဖြစ်ပါသည်။ Rimula R2Extra ၏ အဓိက အားသာချက်မှာ (၁)...
Shell Rimula R3 MV 15W40 About Energised Protection You need to know that your oil will protect your engine under all conditions.No matter how hot, clod...
Service Center-1: No (75/77), Upper Pansoden Road, Mingalar Taungnyunt Township , Yangon, Myanmar.
Phones: +95-1-374953 , +95-9-4309 8456
Service Center-2: No (331/332/333), Thit Sar Road,9Quarter, South Okkalapa Township , Yangon, Myanmar.
Phone: +95-9-26240 5457
© Copyright 2015 automan | Powered by BOD.